Conférence des Bailleurs:TETIKASA 50 HO AN’NY FAMPANDROSOANA -
AccueilRaharaham-pirenenaConférence des Bailleurs:TETIKASA 50 HO AN’NY FAMPANDROSOANA
30/11/2016 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Efa voajerin’ny fitondram-panjakana avokoa ireo lesoka tokony hitondrana vahaolana hampisy fampandrosoana maharitra eto Madagasikara. Nisy ny drafi-pampandrosoana matipaika napetraka momba izany dia ny Pnd (Plan National de Développement). Iompanan’ny sehatry ny fampandrosoana amin’izany ny lafin’ny fanabeazana, ny fahasalamana, ny tsy fanjarian-tsakafo, ny famoronan’asa ho an’ny tanora, ny fiarovana ny tontolo iainana, ny fitrandrahana harena an-kibon’ny tany, ny teknolojia vaovao, ny foto-drafitrasam-bahoaka, ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra, ny fanjakana tsara tantana…Entina eo anoloan’ilay fikaonan-doha lehibe iarahana amin’ireo mpamatsy vola vahiny any Paris manomboka ny 02 hatramin’ny 03 Desambra izao ( Conférence des Bailleurs et Investissseurs ) izany. Tetikasa 50 mahery mahakasika ny fampandrosoana mivantana an’i Madagasikara no hotohanan’ireo minisitra sy tompon’andraiki-panjakana malagasy eo anoloan’ireo mpamatsy vola vahiny mandritra izany.
Tsy voafetra eo anivon’ny mpamatsy vola mahazatra ny hetsika. Ekena fa ny banky iraisam-pirenena no mpamatsy vola fototra nefa kosa misokatra ho an’ny tsy miankina ny fiaraha-miasa. Ny fitondrana ankehitriny tarihin’ny filoha Hery Rajaonarimampianina araka izany no mitady hevitra maharitra hanarenana ny fahapotehana ara-toekarena nisy teto vokatry ny fanonganam-panjakana.
Efa any an-toerana ny delegasiona malagasy hanatrika ity fotoan-dehibe ity. Minisitra mihoatra ny 13 no hiady varotra sy hanohana an’ilay tetikasam-pampandrosoana amin’izany miaraka amin’ireo teknisiana maro mifandraika amin’ilay lohahevitr’ilay tetikasa. Any an-toerana ohatra ny manam-pahaizana momba ny famoronan’asa, ny momba ny tsy fanjarian-tsakafo sns…Ny firenena mikambana tamin’ny alalan’ny sekretera jeneraly lefitra Hervé Ladsous, izay tonga niarahaba ny filoha Hery Rajaonarimampianina teny amin’ny CCI Ivato ny alatsinainy teo, noho ny fahavitan’ny Frankofonia, dia nanamafy fa “ kihon-dalana iray hampiova ny ho an’i Madagasikara sy hahafahany manarina ny simba nandritra ireny krizy ireny io. Vonona hanohana an’i Madagasikara amin’ny fanatanterahana an’ireo tetikasam-pampandrosoany ireo izahay”.
Fanamby lehibe napetraka hisian’ny fampandrosoana haingana nefa maharitra io Conférence des Bailleurs io, hoy ny filoha Hery Rajaonarimampianina.
“ Hiezaka mihitsy izahay hanao fanamby mba hahita mpamatsy vola an’ireo tetikasam-pampandrosoana ireo. Hisokatra ihany koa ny fiaraha-miasa amin’ireny mpamatsy vola tsy miankina sy mpandraharaha tsy miankina ireny mba hanatontosa miaraka an’izay drafi-pampandrosoana napetraka izay. Hitondra fiovana tsara ho an’ny isam-batan’olona ny vokatr’izany”, hoy ny filoha Hery Rajaonarimampianina, momba ity fikaonan-doha any Paris hatao afakampitso ity.
Ao amin’ny foiben’ny Unesco ao Paris no hanatanterahana azy io. Lohalaharana amin’izany ny tetikasa miantraika mivantana amin’ny vahoaka tahaka ny famoronan’asa ho an’ny tanora. Ireo mpiara-miombon’antoka tsy miankina tahaka ny firenena Egyptianina, ny Maraokanina, sns…dia efa nanamafy fa hanohana antsika ihany koa. Hanomboka amin’ireo tetikasa ireo araka izany ny fanarenana ny toekarena potiky ny krizy. Ny filoha Hery Rajaonarimampianina no mitarika ny delegasiona amin’ity ady varotra fitadiavana mpamatsy vola momban’ny tetikasam-pampandrosoana maharitra an’i Madagasikara ity.
Nanipy hafatra ho an’ny vahoaka ny Filohan’ny Repoblika teo aloha, Hery Rajaonarimampianina, tamin’ny lahateny nataony nandritra ny lanonam-panaovan-tsonian’ny fifamindran-draharaha teo aminy sy ny Filoham-panjakana mpisolo toerana. Tamin’izany indrindra no nilazany fa tokony ho sahy hijoro ...Tohiny